Shan Musharax oo u tartameysa Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Hirshabelle * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Oct 17, 2016
Madax ka tirsan dowlada Somalia, guddiga doorashooyinka, xildhibaanada maamulka Hirshabelle weriyeyaal ka socda warbaahinta gudaha iyo dibeda ayaa ku qulqulaya hoolka ay dhaceysso doorashada.
Amaanka magaalada Jowhar ayaa si weyn loo xoojiyey garn ahaan xarunta ay ka dhaceyso doorashada oo wadooyinka soo gala laga xiray gaadiidka iyo dadka aan aqoonsiga wadan, iyadoo ciidamada dowladu ay si adag u baarayaan dadka galaya hoolka doorasgadu ay ja dhaceyso.
Baarlamanka maamulka Hirshabelle ayaa la filayaa inuu goor dhow ka bilaabo magaalada Jowhar doorashada Madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka ee maamulkaas oo ay isku soo taageen illaa shan musharax.
Musharaxiinta Madaxweynaha Hirshabelle oo ka soo wada jeeda beesha Xawaadle oo awood qeybsi ku heshay xilka madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa waxay kala yihiin, Cali Cabdullaahi Cosobe, Cali Maxamed Caraale iyo Maxamed Cabdi Waare.
Saddexda musharax ayaa xalay khudbadaha waxqabadkooda haddii loo doorto xilkan ka jeediyey Baarlamanka maamulka Hirshabelle oo kulan iskugu yimid magaalada Jowhar.
Musharaxiinta xilkan u tartamaya ayaa saaka olole adag ka wada halkaas, iyagoo kulamo lacago kumanaan dollar gaaraya lagu kala qaadanayo la lahaa xildhibaanada wax dooranaya si mid walba uu u helo codadka ugu badan.
Sidoo kale doorashada Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa iyana la qaban doonaa isla maanta waxaana ku tartamaya labo musharax oo ka soo jeeda beesha Abgaal Cismaan kuwaasoo kala ah Cali Cabdullahi Xuseen (Guudlaawe) oo ahaa Gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe iyo siyaasiga Cali Xasan Taakow.
Jordan closes its Inaugural Sovereign Local Currency Sukuk in Cooperation with Islamic Corporation (ICD)